कोरोनाले लग हुन्थ्यो भन्दै थिइन, एकाएक ११ बर्षकि मानसीले यसरी गरिन् देहत्याग! – PathivaraOnline
Home > समाज > कोरोनाले लग हुन्थ्यो भन्दै थिइन, एकाएक ११ बर्षकि मानसीले यसरी गरिन् देहत्याग!
कोरोनाले लग हुन्थ्यो भन्दै थिइन, एकाएक ११ बर्षकि मानसीले यसरी गरिन् देहत्याग!
admin September 13, 2020 समाज	0
सुनापति गाउँपालिका-३, हिलेदेवी (आरूखर्क टाेल), रामेछापकि कक्षा ६ मा अध्ययनरत ११ बर्षिया मानसी मोक्तानले देहत्याग गरेकि छिन् । काेराेनाकाे महामारी भएपनि हिलेदेवीकाे श्री पशुपति उच्च माविले बारअनुसार कक्षा मिलाएर कक्षा सञ्चालन गरेकाे थियाे । कक्षा ६ मा पढ्ने मानसीकाे कक्षामा अलि धेरै विद्यार्थी भएकाले दिन बिराएर कक्षा हुने गर्दथ्याे । सधैँ झैं बिहीबार पनि उनी विद्यालय गइन् । अघिल्लाे दिन दिएकाे गृहकार्य सबैले झैँ उनले पनि शिक्षकलाई बुझाइन् ।
दिउँसाे २ बजेसम्म पढेर विद्यालयले दिएकाे गृहकार्यसहित उनी घर गइन् । विद्यालयका प्रधानाध्यपक तिलक कुमार बलका अनुसार उनी मध्यम खालकी विद्यार्थी हुन् । विद्यालयका अनुसार उक्त दिन पनि अन्य दिनजस्तै सामान्य अवस्थामा पढेर १० मिनेट नजिकैकाे घर गएकी थिइन् ।
फुर्सदकाे समयमा घरायसी काममा सघाउँथिन मानसी: के साेच्छन् बालबालिका
मध्यराति बौद्धमा एक जना ठहरै, २ जना गिरफ्तार, यस्तो छ घटनास्थल (भिडियोमै हेर्नुस्)